‘शत्रु गते’ ट्रेलर पहिलो नम्बरमा ! « THE CINEMA TIMES
‘शत्रु गते’ ट्रेलर पहिलो नम्बरमा !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – शुक्रबार सार्वजनिक ‘शत्रु गते’को ट्रेलर युट्युब ट्रेन्डीङको शिर्ष स्थानमा आईपुगेको छ । वर्षकै प्रतिक्षित सिनेमाको ट्रेलर युट्युबमा रिलिज भएको केहि घण्टामै ट्रेन्डीङ टप १० नम्बर भित्र पर्न सफल भएको थियो ।
यो समाचार तयार गर्दासम्म ट्रेलरलाई ३ लाख ६२ हजार भन्दा बढी हेरिएको छ । ट्रेलरलाई लिएर युट्युबमा सकारात्मक कमेन्ट बर्षा भएका छन् ।
मल्टीस्टार, गीत/संगीत र टिजरले गर्दा ‘शत्रु गते’ पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सिनेमा हो । ‘जात्रा’ निर्देशक प्रदीप भट्टराई निर्देशित सिनेमा चैत ९ गते अलनेपाल रिलिज हुदैछ ।